Ndeipi nzira dzakanakisisa dzekunatsiridza web design yeSeO?
Nzvimbo yekushandura webhusaiti ndiyo inonyanya kukosha yekuvapo kwako kwepaIndaneti sezvo ndicho chinhu chekutanga chaunogona kuona nevatengi pavanotevera domain yako. Nzvimbo yekushandura webhusaiti inoshanda sebhizinesi rebhizimisi rebhizimisi rako. Fungidzira kuti iwe unopa mabhizinesi ako nevanotengesa dinged-up uye yakaipa kadhi rebhizimisi risina kutakura chero ruzivo rwehutano.
Vazhinji vangangoda kumira ushamwari pamwe newe. Izvi ndizvo zvinogona kuitika munharaunda yepaIndaneti apo vashanyi vako vepawebsite vanoita sarudzo zvichienderana nezvinoonekwa zvewebsite yako uye zvatinogadzirisa zvaunopa kwavari. Kana iwe uchida kuita shanduro yako sewe simba rinotyisa rinokonzera jenereta, mubvunzo wokuti "Ungaita sei seji yeSeO?" Zvichida anokunyeverai.
Chokwadi chinotaurirwa, nyaya iyi haigone kupindurwa nemunhu kunze kwevashanyi vako, uye vanozviita nenzira dzakasiyana-siyana. Kuti unzwisise zvaunogona kutenga vatengi, iwe unoda kuva nekodzero yekuongorora tooltics. Ichi chishandiso chinofanira kukupa iwe nehuwandu hwehuwandu nehuwandu hwemashoko maererano nechiitiko chemuenzi wako pane-site. Saka, kuti uvandudze iwe webhutiro yakagadzirwa uye uite kuti ishandise-user, zvinokosha kuti unzwisise kuti nei vashandisi vachiuya panzvimbo yako yepakutanga.
Muchikamu chino, uchawana mamwe mazano ekugadzirisa maitiro uye nzira dzekutarisa zvaunogona kuita nevatengi pakugadziriswa kwako.
Nzira dzakakosha dzewebsite yako yekugadzirisa kukwanisa
Pane inenge isingagumi yemaitiro unofanirwa kuifunga paunenge uchishanda webhu yako. Zvisinei, tinogona kusiyanisa zvinhu zvitatu zvinokosha izvo zvinofanira kuva chikamu chesaiti yese:
Zvose izvi zvinokonzerwa ne SEO zvinogona kuchinja zvikuru iwe webusaiti yako-ushamwari uye hukubatsira kuti uite zvinangwa zvebhizimisi rako. Mundima iyi, uchawana zvimwe zvinokosha pakugadzirisa nzvimbo yako yekugadzirisa kukwezva vamwe vangave vatengi uye kaviri mari yako.
Unofanirwa kujekesa shanduro yako yepaiti kuitira kuti zvive nyore kufamba uye zvinofadza.Paunenge uchivandudza marongerwo ako, nguva dzose funga nezvevashanyi venzvimbo yako. Sevashandisi, ruzivo urwu hunokosha hwehutengo hweGoogle. Vangangodaro vatengi vanofanira kukwanisa kubudirira kuburikidza nemapeji ewebhu kuitira kuwana ruzivo rwavanoda. Izvo zvichaita kuti vashanyi vako vasave nekushivirira uye kuderedza webusaiti bounce rate. Uyezve, urongwa hunobatsira uye hunoshandiswa nevashandi hunofanira kunge huchivakwa nekugadzirisa kuitira kuti zvinyorwa zviwanike nyore nyore nevashanyi.
Mazuva ano, grid maitiro anozivikanwa pakati pevarimi webmasters sezvavanenge vachida kuchinja. Iro grid masangano anosanganisira chirongwa chinogadzirisa, 960 Grid system, Bootstrap 3 nezvimwe zvishandiso zvehutano. Aya maitiro anobvumira web designers kugadzira zvakanaka zvakagadzirirwa uye nyore nyore kuenda kunzvimbo yekugadzirisa nzvimbo.
Sezvo Google ichikoshesa mawebhusayithi e-mobile-responsive uye inoitora seyoyo hurukuro, iwe unofanirwa kuva newebsite yakagadzirirwa iyo inoteerera pane zvese zvinofona. Zvose zvinokosha webhutaneti zvinogadziriswa zvakakwana zvakagadzirirwa kuti zvikwanise kukwana kwemafashoni efoni. Uyezve, unofanirwa kusiya chikamu pakati pebhatani nemabasa ari muzvirongwa kuitira kuti vashanyi vako vaende nyore nyore nzvimbo yako kubva kumafoni. Ndinokukurudzira kuti udzivise chero yakasimbiswa yakagadziriswa nekugadzirisa maitiro ekugadzirisa mafungiro sezvo asingakwanise kunyatsoratidzwa pamafoni.
Kuita kuti webhusaiti yako igadzikane uye ishandise-user. Iva nechokwadi chokuti mafonti ako echisikiro uye akakodzera chero chipikicha. Kana zvisina kudaro, zvinyorwa zvako zvinogona kutarisa zviduku uye zvisingaverengeki. Semuenzaniso, zvinyorwa mumitemo yakareba zvakaoma nzira yekuverenga sezvo tsamba dzichibatanirana. Uyezve, ndinokurudzira kubvisa nhamba yekunyora kwemashoko makuru sezvo zvingaratidzika zvisina kunaka kune vaverengi.
Kutaurira vashandi nezvekukosha kwezvinhu zvepaiti yako, shandisa nzvimbo dzakachena. Iyo inobvumira vashandi kuti vave nechapwa kubva pane zvose zvinoonekwa uye kuvhara zvinyorwa yako zvakagadzirwa zvakanaka. Nokushandisa mitsvuku michena, iwe uchavandudza peji rako rinoona. Uyezve, iyo inyanzvi yekuita kuti zvinyorwa zvako zvionekwe pane zvakasiyana-siyana zvikwangwani.
Funga nezvenzira yako yemavara. Sezvo mavara angaita kuti iwe unogona kukwanisa kugadzirisa manzwiro uye mafungiro, iwe unoda kushandisa mivara yakasviba uye usadzivisa zvinhu zvakawanda zvakajeka. Ita vateereri vako manzwiro anofadza kuburikidza nekuita zvinofadza mavara emeso. Uyezve, usashandise mivara yakawandisa sezvo inogona kuvhiringidza mutengi kubva pakutenga.
Kutsvaga injini yekutsvaga ndiyo inonyanya kukosha yehutano hwekutsvaga mune zvebhizimisi sezvo ichiita ruzivo rwakananga kune imwe website.
SEO inobatsira kuziva kuti ndeupi ruzivo rwunofanira kuratidzwa kune vamwe vateereri. Kuvandudza marimi ekuzivikanwa nekusimudza webusaiti yekutendeuka, unofanira kushandura SEO. Iko kunoshandisa kushandiswa kwemashoko makuru, misoro, zvinyorwa, mifananidzo, infographics, mavhidhiyo epikicha, mukati uye kunze kwemasangano, tsanangudzo yemeta uye zviri mukati. Zviripo ndeye mambo, uye ndiyo ndiyo nzira yakanakisisa iyo iwe unogona kuita kuti webhusaiti yako ive yeOOO.
Kuita kuti zvinyorwa zvako zvionekwe kune zvose zviri kutsvaga bots uye vatengi vako, ita nechokwadi kuti unosanganisira zvakakosha kumashoko ekutsvaga emabhizimisi mauri. Vashandi vangada kuwana ruzivo rwaidiwa pakutanga, ndicho chikonzero iwe unofanirwa kuita zvinhu zvakakosha pane zviri papeji rako zviri nyore kuwana. Peji rako rewebhu rinofanira kuva nyore kuverenga kuburikidza. Saka, unofanirwa kudzivisa keyword stuffing nemagwaro akawanda. Iva nechokwadi chokuti zvinyorwa zvako zvakanyatsogadziriswa uye zvinosanganisira bullet uye nhamba mazita, zvinyorwa zvishoma, mazita, uye zvinyorwa zvinyorwa.
Zvakare, zvakakosha kuisa pfungwa pane chinangwa chekutanga chesaiti yako. Iwe unofanirwa kuisa hurukuro huru yewebsite yako pajiji rekunoita kuti vashanyi vazive kuti nzvimbo yako yakaratidzwa. Iwe unofanirwa kutarisa pamusana pekutsvaga kwepaimba kuti ubate vashandisi uye ugovaita mukutevera mamwe mapeji kuti udzike zvakadzama pachidzidzo.
Zvakakosha kuchengetedza webhusaiti nyore uye isingagumi. Sangano rekushandurwa kwewebhu rinoita kuti vashanyi vafambe mumapepu nyore nyore uye zvinozovandudza ruzivo rwavo. Munyika yanhasi, vashandisi havadi kutora nguva vachitsvaga ruzivo rwaidikanwa. Vanoda kuitora nokukurumidza uye nyore. Ndicho chikonzero chirevo chenyu chinofanira kunge chakanyatsogadziriswa kuti chioneke kune vose vanoshandisa. Iwe unofanirwa kudzivisa chero ruzivo rwusingadikanwi uye kuderedza nhamba yemagwaro kusvika paudiki Source .